★မြန်မာ့အလင်း★: “For Years,” The Taliban Has Been Fighting the U.S. with Arms that the U.S. Shipped to Afghanistan
ထုံးဆံအတိုင်း အမေရိကန်ကတော့ သူများကိုပဲ လက်ညှိထိုးစောက်တင်းပြောတာပဲ မဟုတ်ပါလား? (ကိုယ်တိုင်က မိမိပြည်သူတွေကို အမျိုးမျိုးသတ်ဖြတ်နေပြီး သတင်းတွေမှာတော့ လူအခွင့်အရေးမြှင့်တင်နေတဲ့ ကြောင်သူတော်ကြီးပေါ့။ မွတ်ဆလင်တွေ ဒီမိုကရေစီတောင်းဆိုနေတာနဲ့ ပုံစံသွားတူနေတယ်။ ) အမေရိကန် လက်နက်တွေ Taliban လက်ထဲရောက်တာ အာဖဂန် လုံခြုံရေးက ပြန်ပြီး ရောင်းစားလို့လား? အမေရိကန် အစိုးရက ထောက်ပံ့ထားသလားဆိုတာ မိမိဖာသာ စဉ်းစားကြည့်ပေါ့။ လူ ၃၀ မှာ ၁၇ ယောက်က အမေရိကန် လက်နက်နဲ့ဆိုပဲ။ Taliban လက်နက်တ၀က်က အမေရိကန် လက်နက်ဖြစ်နေတာ CIA မသိတာ တော်တော် စဉ်းစားဖို့ကောင်းတဲ့ အချက်ပါ။ နိုင်ငံရေးဆိုတာ လိမ်ညာကောက်ကျစ်ပြီး လုပ်ကျတာ မဟုတ်ပါလား? ကျုပ်တို့ မြန်မာတွေကတော့ တံဆိပ်တွေတူရင် ကိုယ့်လူလို့ သတ်မှတ်နေတာ ဘယ်လောက် ရယ်ဖို့ကောင်းလဲ?
ကျုပ်တို့ အနာဂတ်နိုင်ငံရေးကို အနောက်ဖက်လုပ်ကိုင်ပုံကို ဆက်လက် အတုခိုးပြီး လုပ်သွားမလား? မိမိလမ်းသစ်နဲ့ စဉ်းစားလုပ်မလား. . . ကဲကဲ.. အချိန်ရ၇င် နဖူးပေါ် လက်တင်ပြီး စဉ်းစားပေါ့ဗျာ